जापानमा जति मेहनत गर्न सके नेपालमै छ भविष्य |
Tuesday, July 16, 2019 । जापान
कामको बोझले शरीर थकित हुन्छ । हप्ताको एक दिन बिदा पाईन्छ । बिदाको दिन कहिलेकहीँ नेपालमा रहनुभएका साथीभाइ अनि आफन्तजनहरुसँग फोनमा कुराकानी हुन्छ । उनीहरु जापानमा वार्किङ्ग भिषा खुल्यो के हो ? वास्ताबिकता भनि सोध्छन् । अधिकांशको प्रश्न भिषा प्रकृया, तलब र लाग्ने खर्चबारे हुन्छन् ।
उनीहरुको यो सोधाई म अस्वभाविक ठान्दिन किनकी नेपालमा बेरोजगारी समस्याका नेपालमा यति विकराल बनेको छ की जो कोही युवाहरु विदेश जान चाहन्छन् । उनीहरुको बुझाईमा जापानमा जसले पनि मासिक दुई लाख रुपैयाँ कमाईन्छ, ऋणधन गरेर जापान गए पछि दुःखै गरेर भए पनि एक वर्षभित्र उकास्न सकिन्छ । तर, वास्ताबिकता उनीहरुको बुझाई भन्दा धेरै भिन्न छ । वास्ताबिकता बुझ्ने कोशिस धेरैले गरेकै छन, नगन्यले मात्र गरेको पाइन्छ ।
जापान विश्वकै महँगी देशको सूचीमा पर्छ । यहाँ विशेष गरी बस्ने कोठाको भाडा, मोबाइल खर्च, रेल भाडा महँगो हुन्छ । काम गर्न थालिएको एक वर्षपछि जापान सरकारको नीति नियमानुसार यहाँकै नागारिकसरह कर र बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालबाट आएर सिधै यहाँको नियम पालना गर्न गाह्रो हुन्छ । आफ्नो भविश्यको सुरक्षाक लागि बिमा र कर नतिरि हुँदैन । कमाउन आएका हामी नेपालीको बाध्यता पैसा कमाएर नेपाल पठाउनै प¥यो ।
केही वर्ष अगाडिसम्म हप्तामा २८ घण्टा भन्दा बढी काम गरे पनि जापानमा भिषाको लागि खासै समस्या थिएन । तर, आजभेलि नेपालीहरु जापानी इमिग्रेशनको निगारानीमा परेको छ । भिषा र कामको समस्याका कारण आजकल धेरै नेपालीहरुको ओठमा हाँसो छैन ।
हप्तामा २८ घण्टाको कामले एक जनाको पेट पाल्ने बाहेक थप केही गर्न सकिदैन । तोकिएको घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने वा ओभरटाइम धेरै गर्ने नेपालीहरुलाई इमिग्रेसनले बारम्बर चेतावानी दिने गर्छन् । नमाने अन्ततः नेपाल फिर्ता पठाइदिन्छन् ।
जापानमा बस्ने नेपालीहरु कार्यस्थल, रेल यात्रा, बिभिन्न जमघट र कार्यक्रमहरुमा साथीभाइहरुसँग विशेषत काम र भिषाको समस्याबारे गफगाफ गर्ने गर्दछ । जापानमा अधिकांश नेपालीहरुले भोग्दै आइरहेका समस्याहरु समाधान गर्ने तर्फ नगन्यले मात्र ध्यान दिंएका छन् । उचित समन्वयको अभाव, समयमा सही सूचना प्राप्त हुन नसक्दा जापानमा रहेका नेपालीहरु कुहिरोको काग झैं भैरहेका छन् ।
नेपालीहरुको समस्या उनीहरु आफैले समाधान गर्ने हुन् । त्यसका लागि हेल्पडेक्स र सूचना तथा परामर्श केन्द्र खोलिनु पर्दछ । त्यसका लागि नेपाली संघसंस्थाहरु र जिम्मेवार व्यक्तिहरुले मुख्य जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु पर्दछ ।
अहिले नेपालमा कयौं युवाहरु हल्लाको पछि लागेर वा एजेन्टहरुको प्रलोभनमा परेर जापान जान लाखौ रुपैयाँ खÞर्च गर्न तयार देखिन्छन् । कतिपय नेपाली युवाहरु ‘जापानमा वार्किङ्ग भिषा खुल्यो भन्छन्, भिषा पठाइदिनु, म पनि आउन पर्यो, नेपालमा बसेर के गर्नु ?’ भन्छन् । कसै कसैले ‘जापानमा नेपाली रेस्टुरेन्ट, केयरगिभरमा मान्छे मागिरहेको छ’ बुझ्नु भन्छन् त कसैले ‘टुरिस्ट भिषामा आएर काम गर्नु प¥यो’ भन्छन् ।
उनीहरुले यसो भन्नु अस्वाभाभिक होइन किनकी म पनि अर्को कुनै दुनियाबाट जापान आएको होइन । त्यही धरातल र माटोमा हुर्किएर आएको हुँ । मलाई पनि थाहा छ काम बिहिन भएर नेपाल रहँदाको पिडा । आफ्नो अनि घर, परिवारको सुन्दर भविश्यको सपना देख्नु नराम्रो होइन । मैले पनि नेपाल रहँदा विदेशमा रहेका साथीहरु र आफन्तजनसँग यस्तै चाहना अनि अनुरोध नगरेको होइन, गरेकै हुँ ।
जापानमा बल्लतल्ल आएका विद्यार्थीहरु भिषा, डिपेन्डेन्ट भिषालगायत अन्य भिषामा आएका नेपालीहरु भिषा रिन्यु गर्न नपाउदै फर्कनु पर्ने दुःखद अवस्था धेरैले भोगेका छन् ।
कमाउने सोच राख्नु नराम्रो होइन । तर, आतुर नगर्नुहोस्, पहिला बुझ्नुहोस् । जापानमा पाइला टेकेपछि पालना गर्नुपर्ने नीति, नियम, कर, बिमा, दैनिक हुने खर्च, कलेज खर्च र यहाँको संस्कार, संस्कृति र जीवनशैली अध्ययन गर्नुहोस् । जापान आएर जोखिम मोल्न सकिएन, दुःख र धैर्यता गर्न सकिएन भने पुर्पुरोमा हात राख्नुको विकल्प छैन । अतः तपाईसँग तन, मन र धन छ, त्यसमाथि केही गर्छु भन्ने जोश र जागर छ भने जापानमै आउनु पर्छ भन्ने छैन । नेपालमै प्रचुर सम्भावना छन् । देशमै संघर्ष गरी बाँच्न सिक्नुहोस् । विदेश आएर राम्रो काम गर्न पाइन्छ, धेरै कमाइन्छ भन्ने सोच त्याग्नुहोस् । दुई लाख कमाउन के कति दुःख भोग्नु पर्छ पहिला बुझ्नुहोस् । तपाई मानसिक, शारिरीक हर हिसाबले दुःख गर्न तयार हुनुहन्छ भने मात्र जापान आउनुहोस् । होइन भने यहाँ जति मिहेनत गरे नेपालमै धेरै कमाउन सकिन्छ । सही सम्भावना पहिल्याएर देशमै मिहेनत गर्न सके तपाईंको भविश्य नेपालमै छ ।
२. वाग्मती प्रदेशले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने
३. हलेसी तुवाचुङका राईले जिते कोरोना
४. साउदीमा कोरोना संक्रमित ९५ हजार नाघ्यो, निको हुनेको संख्या बढ्दै
५. भोजपुरमा पाँच जनालाई कोरोना पुष्टि
६. प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग छलफल